कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दो, काठमाडौंमा पनि भेटिए संक्रमित – Action Media
‘कालो ढुसी के हो ? यसका लक्षणहरु के–के हुन् ?, कस्ता बिरामीहरुमा यसको संक्रमण देखिन्छ ? यसको पहिचान कसरी गर्ने ?, सचेतना अपनाउन के–के गर्न सकिन्छ ?, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?, उपचार विधिहरु के–के हुन् ? प्रयोग गरिने औषधिहरु के–के हुन् ?’ भन्नेबारे हेल्थ वर्करहरुलाई सुझाव दिनका लागि एडभाइजरी जारी गरिएको डा. न्यौपाने बताउँछन् ।
Prevनेपालमा पनि पुष्टि भएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको नाम ‘डेल्टा’ राखियो
Nextढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा